အမိုက်စား သေနတ်ပစ်ဂိမ်း Critical Ops | Playon.com
ကာစီနို / CasinoCasino
ဂီတ & အက / Music & DanceMusic / Dance
စကားလုံးဂိမ်း / WordWord
စစ်တုရင်ဆိုင်ရာ / BoardBoard
စီမြူလေးရှင်း / SimulationSimulation
စွန့်စားခန်း / AdventureAdventure
ထရီဗီယာ / TriviaTrivia
နည်းဗျူဟာ_RTS / Strategy_RTSStrategy_RTS
ပစ်ခတ်ခြင်း_FPS / Shooting_FPSShooting_FPS
ပစ်ခတ်ခြင်း_TPS / Shooting_TPSShooting_TPS
ပညာရေး / EducationalEducational
ပဟေဠိ / PuzzlePuzzle
ဖဲ / CardCard
မီနီဂိမ်း / Casual & Mini GameCasual / Mini Game
အက်ရှင် / ActionAction
အပြေးပြိုင်ခြင်း / RacingRacing
အားကစား / SportsSports
အာကန်ဒီ / ArcadeArcade
အာပီဂျီ / RPGRPG
အွန်လိုင်း_MMO / Online_MMOOnline_MMO
အွန်လိုင်း_MO / Online_MOOnline_MO
အွန်လိုင်း-တစ်ယောက်ဂိမ်း / Online_Single PlayOnline_Single Play
Home » Article » အမိုက်စား သေနတ်ပစ်ဂိမ်း Critical Ops
အမိုက်စား သေနတ်ပစ်ဂိမ်း Critical Ops
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါနော်။ Back to Millenniums ဆိုတဲ့ ရှိုးပွဲလေးကိုရောက်ဖြစ်ရင်း ကျောင်းလစ်ပြီး အသည်းအသန်ဂိမ်းဆိုင်ပြေးရတဲ့ ငယ်ဘဝကိုလည်းသတိရမိတယ်။ အဲ့အချိန်တုန်းက ကျောင်းလစ်ပြီးဆော့ရတဲ့ဂိမ်းကတော့ တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ 90s born တွေရဲ့ အသည်းစွဲ Counter Strike ပါပဲ။ အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့ အင်တာနက်ဆိုတာလည်း တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်မရှိသေးတော့ အိမ်မှာ PC နဲ့ တစ်ယောက်တည်းကစားရတာထက်စာရင် internet ဆိုင်သွား သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချိတ်ဆော့ပြီး အော်ဟစ်ရတာကို ကျွန်တော်ကတော့ ပိုနှစ်သက်ခဲ့မိတယ်ဗျ။
နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှcounter strike ကို version အမျိုးမျိုး ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ လည်းထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ PC နဲ့သာမက mobile phone များနဲ့ပါ Counter Strike ကိုကစားနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Offline Game တွေရှိသလို Mobile Data နဲ့မှကစားနိုင်မဲ့ဂိမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Offline Game တွေထက်စာရင် Online Game တွေကိုပိုကြိုက်တယ် ဗျ (Game Chat Box ကနေ ရန်ဖြစ်လို့လည်းရတယ်လေ)။ ဟဲဟဲ အပျော်သဘောပါဗျ။ ဆော့လို့ကောင်းမဲ့ Counter Strike ဂိမ်းလေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ကျွန်တော့အကြိုက်လည်းဖြစ်၊ အခုနောက်ပိုင်း ကလေးများသာမက လူကြီးများပါ ကြိုက်နှစ်သက်စွာ စွဲစွဲလန်းလန်းဆော့ကစားနေကြတဲ့ Critical Ops ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူကတော့ Mobile တွင်သာမက PC နဲ့ပါ ဆော့ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီး Online Game အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Counter Terrorists အနေနဲ့ ကစားမလား၊ Terrorists အနေနဲ့ကစားမလား စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ကိုယ်တိုင် Game Room တစ်ခုထောင်ကာ Public ဖွင့်ထားပါက နိုင်ငံတကာမှ ကစားဖော်များလည်း ဝင်ရောက်ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ASIA, EUROPE, NORTH AMERICA,RUSSIA, SOUTH AMERICA, TURKEY ဆိုပြီး Game Server ၆ မျိုးရှိပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Server ကိုရွေးချယ်ကစားနိုင်ပါတယ်။ အဲ ဘိုမ ချောချောလေးတွေနဲ့ တူတူကစားချင်ရင်တော့ EUROPE Server မှာဆော့ပေါ့ဗျ (ဒါလည်းအပျော်သဘောပါနော်)။ Critical Ops ကိုကစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်
တို့မှာ download ရယူနိုင်ပါတယ်။
တစ်မူထူးခြားတဲ့ အသွင်သစ်နဲ့ စကားလုံး ပဟေဠိဂိမ်း Sidewords
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ RPG ဂိမ်းအရသာ အပြည့်ရစေမယ့် POSTKNIGHT
သမိုင်း ဒဏ္ဍာရီထဲက သူရဲကောင်းတွေကို ဆင့်ခေါ်ပြီး ဆော့ကစားရမယ့် Fate/Grand Order
သီချင်းသံနဲ့ စည်းချက်ကျကျ ပြေးရမယ့် အပြေးဂိမ်း Lost in Harmony
ကဒ်ထုပ်တွေ မလိုအပ်တော့တဲ့ ကဒ်ဂိမ်း Hearthstone
3 ကစားရန်အဆင်ပြေပြီး လူကြိုက်များရေပန်းစားသောCandy Crush Saga
2 Dishonored2$39.99 - $59.99
1 ရုပ်ရှင်ထဲကအတိုင်း Zombie တွေကို တိုက်ခိုက်ရမယ့် သည်းထိတ်ရင်ဖိုဂိမ်း World War Z
3 ကစားသူများသောM.O.G ဂိမ်းများ
0 ရှမ်းကိုးမီး / Shan Koe Mee Free
3 Pokémon GO Free
Playon.comသည် စမတ်ဖုန်းဂိမ်းများနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြပေးသည့် Community Portal ဖြစ်ပါသည်။ဂိမ်းအကြောင်းရှင်းလင်းချက်များ၊ ဂိမ်းစျေးများ၊ SNSသတင်းအချက်အလက်များ၊ User Review များကို တင်ပေးထားပါသည်။
ကာစီနို / Casino
ဂီတ & အက / Music & Dance
စကားလုံးဂိမ်း / Word
စစ်တုရင်ဆိုင်ရာ / Board
စီမြူလေးရှင်း / Simulation
စွန့်စားခန်း / Adventure
ထရီဗီယာ / Trivia
နည်းဗျူဟာ_RTS / Strategy_RTS
ပစ်ခတ်ခြင်း_FPS / Shooting_FPS
ပစ်ခတ်ခြင်း_TPS / Shooting_TPS
ပညာရေး / Educational
ပဟေဠိ / Puzzle
ဖဲ / Card
မီနီဂိမ်း / Casual & Mini Game
အက်ရှင် / Action
အပြေးပြိုင်ခြင်း / Racing
အားကစား / Sports
အာကန်ဒီ / Arcade
အာပီဂျီ / RPG
အွန်လိုင်း_MMO / Online_MMO
အွန်လိုင်း_MO / Online_MO
အွန်လိုင်း-တစ်ယောက်ဂိမ်း / Online_Single Play
Copyright Playon.com. All rights reserved.
Term of Use Operating company